खाना खाँदा किन राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ? - Health Chautari Health Chautari
२ चैत्र २०७७, सोमबार १८:०५
खाना खाँदा किन राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ?
Published on : २ चैत्र २०७७, सोमबार १८:०५
धेरैजसो मानिसहरु खानेकुरा कसरी खाने ? कति खाने ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । अझ भनुँ, राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई त त्यति ध्यान नै दिँदैनन् । तर पाचनक्रियाको लागि यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । जब हामी पाचनक्रियाको कुरा गर्छौं, यसको प्रसङ्ग पेटबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्ने गर्छौं । तर वास्तवमा खानेकुरा पेटमा नपुग्दै पाचन क्रिया सुरु भएको मानिन्छ । जब हामी मुखबाट खाना खान सुरु गर्छौं, सँगसँगै पाचन क्रिया सुरु हुन्छ । खाना चपाउन सुरु गर्दा मुखमा र्‍यालसँगै पाचन इन्जाइम निस्केर खाना टुक्राउन सहज गर्ने गर्छ ।
योसँगै हाम्रो दाँतको संरचनाका बारेमा पनि थोरै ज्ञान राखौं । दाँतहरू चार किसिमका हुन्छन्-इन्सिजर, क्यानाइन, प्रि-मोलार र मोलार । धारिला र पातला अगाडिका दुईवटा दाँतहरु इन्सिजर हुन् । जसको काम भनेको खानालाई टोक्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, इन्सिजर सँगै जोडिएको दाँत हुन्छ एउटा क्यानाइन जसको काम चिथोर्ने हुन्छ । अरू रहेका मोटा चेप्टा दाँतहरूको काम भनेको खाना चपाउने हो । क्यानाइन मांसहारी जनावरहरूमा विकसित हुन्छ भने हामी मानिसमा त्यति धेरै विकसित हुँदैन । यसरी दाँतको संरचना अनुसार टोक्न र चपाउनका लागि मुख्यतः बनाइएका देखिन्छन् । खानालाई तरल अवस्थासम्म पुर्‍याउन समेत र पौष्टिक तत्त्वहरू राम्रोसँग शरीरले शोषित गरोस् भन्नका लागि समेत राम्ररी चपाएर खानुपर्छ ।
आजकलको व्यस्त समाजमा मानिसहरूसँग खाना खाने पर्याप्त समय हुँदैन । त्यसकारण खाना चपाएर खानुपर्ने नियमलाई त्यति महत्व दिइँदैन । टिभी हेर्दै, मोबाइल चलाउँदै, गफ गर्दै खाने चलन समेत विकसित छ । तर खाना खाँदा शान्त ठाउँमा बसेर हातले नै खानुपर्छ । चम्चाले खाँदा अम्ल र इन्जाइमहरु धेरै स्रावित हुन नसक्ने भएकाले खाना प्रतिरुचि पनि नबढ्न सक्छ ।
अर्कोकुरा खानापछि खाने सलाद पनि राम्ररी चपाएर खानु उपयुक्त हुन्छ । सलाद राम्ररी चपाएर खाँदा, खाना खाएपछि निस्कने एसिडिटीलाई समन गर्छ। सलादमा आन्द्रा सफा गर्न चाहिने रेसा प्रशस्त हुन्छ । यसको दैनिक प्रयोगले शरीर सफा हुन्छ र हलुका पनि हुन्छ । तर सलादमा शीत गुण हुने भएकाले हतारहतार खाँदा तातो र चिसो नमिलेर पेट फुल्ने, डुम्म हुने हुनसक्छ । त्यसैले पनि पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउनका लागि शरीरको उचित तौल तथा पोषणतत्व कायम गर्नाका लागि खानेकुरा राम्ररी चपाएर खानुपर्ने अपरिहार्य कारणहरू बुझ्न जरुरी छ ।